I-Elite 3, eyona ndlela ifikelelekayo kaJabra, igcina umgangatho [Uphononongo] | Iindaba zegajethi
I-Elite 3, eyona ndlela ifikelelekayo kaJabra, igcina umgangatho [Jonga]
UMiguel Hernandez | 20/12/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Sibambene ngesandla ngokuphehlelelwa kweJabra Elite 7 Pro esihlalutye apha kwiGajethi ye-Actualidad kutshanje, eyona ndlela inexabiso eliphantsi kwikhathalogu ye-Jabra ukuza kuthi ga ngoku ifikile, sithethe ngendlela engenakuba ngenye indlela nge-Elite 3, inguqulelo yayo "ethintelweyo" eseyimveliso yeJabra nazo zonke ezo umthetho.
Sikuzisa uhlalutyo olunzulu lwe-Jabra Elite 3, imodeli enokuzimela okukhulu kunye nokuchasana kwamanzi kunye nesandi esihle kakhulu. Zijonge kunye nathi ukufumanisa ukuba zeziphi iihedisethi zeJabra ezifikelelekayo ezinokunikezela ukuza kuthi ga ngoku.
1 Izixhobo kunye noyilo
3 Jabra Sound + kufuneka ube
4 Ukuchasa kunye nokuthuthuzela
5 Ukuzimela kunye noluvo emva kokusetyenziswa
6 Okuhle nokubi
Ngokubhekiselele kwinkangeleko, njengoninzi lweehedisethi zeJabra, umgca woyilo lwefemu ugciniwe, iimveliso apho intuthuzelo kunye nesandi ngokucacileyo ukoyisa ngaphezu kwayo yonke enye into. Ngale ndlela, i-Jabra iyaqhubeka nokugcina iifom zayo ezikhethekileyo ukuba nangona zingabonakali zihle kakhulu kwimarike, zinesizathu sokuba, esele ingaphezulu kakhulu kunokuba abaninzi abavelisi banokuthetha.
Imilinganiselo ye-Headphone: 20,1 × 27,2 × 20,8mm
Imilinganiselo yamatyala: 64,15 × 28,47 × 34,6mm
Icala, ngokwenxalenye yalo, ligcina uyilo kunye nobukhulu bophawu, isitayile "sebhokisi yepilisi" sixhaphake kakhulu eJabra kwaye, njengee-headphones, sigxile kuphela ekusebenzeni kunye nokuqina. Ngesi sihlandlo, apho babefuna "ukuvuselela" ezi Jabra ngokuchanekileyo kuluhlu lwemibala, apho ukongeza kwigolide yakudala kunye negolide ekhanyayo, siya kuba nakho ukufikelela kuguqulelo lwe-navy blue kunye nenye emfusa. .utsala amehlo. KUNYEImodeli ehlalutyiweyo kwimeko yethu imnyama, ebandakanya kwiphakheji: Iicushion ze-silicone zendlebe ezintandathu (ubala ezo sele zincanyathiselwe kwii-earbuds), i-cargese yokutshaja, intambo ye-USB-C, kunye nee-earbuds.
Sinee-headphones ezinazo kunye nabaqhubi (izithethi) zeemilimitha ezi-6, oku kuyababonelela ngokusekwe kwiinkcukacha zobugcisa 20 Hz ukuya 20 kHz bandwidth kudlalwa umculo kwaye ukusuka kwi-100 Hz ukuya kwi-8 kHz xa sithetha ngeengxoxo zefowuni. Ngokuhambelana noku kukhankanywe ngasentla, ine-microphone ezine ze-MEMS ezisinceda sigcine iincoko ezicacileyo, into eqhelekileyo nakwi-Jabra. I-bandwidth yeemakrofoni iphakathi kwe-100 Hz kunye ne-8 kHz, njengoko sibonile kwiinkcukacha malunga ne-bandwidth yeefowuni zeefowuni.
Ubunzima betyala lokutshaja: 33,4 grams
Ubunzima bentloko: 4,6 iigrem
I-Qualcomm aptX yomsindo weHD
Ndingayithenga phi iJabra Elite 3 ngexabiso elifanelekileyo? Kwi LE LINK.
Kwinqanaba lokudibanisa, ezi headphones zineBluetooth 5.2 apho iiprofayili ze-classic ze-A2DP v1.3, i-AVRCP v1.6, i-HFP v1.7, i-HSP v1.2 isetyenziswa, kunye noluhlu lokusetyenziswa ngokwesiqhelo kweemitha ezili-10 kunye nokwenzeka. zokucengceleza ukuya kwizixhobo ezintandathu. Ngokucacileyo, ngenxa yokusetyenziswa kweBluetooth 5.2, banenkqubo yokutshisa ngokuzenzekelayo xa sibakhupha ngaphandle kwebhokisi. kunye nokuvalwa oluzenzekelayo kwakhona xa 15 imizuzu ngaphandle uqhagamshelwano okanye imizuzu engama-30 ngaphandle umsebenzi.
Jabra Sound + kufuneka ube
Isicelo seJabra sisongezo sesoftware esiza kusivumela ukuba senze uhlengahlengiso oluyimfuneko, ngaphaya kwamaqhosha oomatshini afunyenwe kwii-headphones ezikhankanyiweyo kwaye sinokwenza ngokwezifiso ngokuthanda kwesi sicelo, sinamandla okulinganisa kunye nohlaziyo lwesoftware eyenza isoftware yakho ibe lixabiso elifanelekileyo kwaye ikwazi ukwenza isigqibo sokuyithenga. Esi sicelo, esihambelanayo kunye nezixhobo zombini ze-Android kunye ne-iOS, ikuvumela ukuba wenze inani elifanelekileyo loqwalaselo olufanele ukuzama ngenxa yezizathu ezininzi.
Ngale ndlela, sicebisa ukuba udlule kuzo naziphi na iividiyo apho siye sahlalutya izixhobo zeJabra ngamanye amaxesha ukuze ukwazi ukujonga ukusebenza kweSandi +, esi sicelo seJabra esisimahla sokukhuphela.
Ukuchasa kunye nokuthuthuzela
Kule meko sinokumelana namanzi kunye nokutshiza ngesatifikethi se-IP55, oku kuyasiqinisekisa ubuncinci ukuba siya kukwazi ukuwasebenzisa emvuleni naxa sisenza uqeqesho, Ngokuphathelene noku, i-Jabra igcina umgangatho womgangatho nokuba, njengoko sesitshilo, Sijongene neyona mveliso inexabiso eliphantsi ukuza kuthi ga ngoku kwikhathalogu yenkampani.
Ngendlela efanayo, kwinqanaba lokuphucula umgangatho woqhagamshelo kunye nentuthuzelo yokusetyenziswa, ezi Jabra Elite 3 zineendibaniselwano ezintathu zesoftware yomntu wesithathu enomdla enokwenza ubomi bethu bube lula:
I-Google Fast Pair, yokudibanisa ngokupheleleyo kunye nokusebenza kwizixhobo ezihambelanayo ze-Android kunye neChromebook.
I-Spotify Tap, ukuphucula kunye nokwenza ngokwezifiso ukucwangciswa kwamaqhosha xa sisebenzisa iqonga lokudlala leSpotify.
I-Alexa edityanisiweyo ukuze inxibelelane nomncedisi weAmazon.
Ukuzimela kunye noluvo emva kokusetyenziswa
I-Jabra isinike idatha ethembekileyo malunga ne-mAh yebhetri, into eqhelekileyo kwi-brand, nangona kunjalo Baqikelela iiyure ezisi-7 zokuzimela ngentlawulo ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-28 ukuba sibandakanya iintlawulo ezenziwe ngetyala. Ifemu ikwasithembisa ukuba ngemizuzu nje elishumi yokutshaja siyakufumana malunga neyure enye yokusetyenziswa. Ezi datha zenziwe ngokutsha phantse ngokupheleleyo kwiimvavanyo zethu, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo ukuba abanako ukucinywa kwengxolo esebenzayo (ANC) kwaye okoko nje singasebenzisi imowudi ye-HearThrough esele ikhona phantse kuzo zonke izixhobo zeJabra zoluhlu olwahlukileyo.
Umgangatho wesandi ulungile xa ucinga ngexabiso, umgangatho womgangatho ogcinwa kwi-Jabra ngokuhamba kwexesha, kwaye oko kukuthi. Ezi Elite 3 zinokufumaneka ngaphantsi kwee-euro ezingama-80 kwiindawo eziqhelekileyo zokuthengisa, ukubenza ukhetho olulungileyo kwabo bafuna ukuthenga imveliso yeJabra okokuqala okanye bathathe indawo yezihlandlo "ezikhethekileyo". Ngaphandle kwamathandabuzo, phantse njengesiqhelo, i-Jabra ikwazile ukwenza imveliso engathobekiyo enika kanye oko ikunikayo.
Ithunyelwe nge: I-20 ngoDisemba 2021
Utshintsho lokugqibela: I-11 ngoDisemba 2021
Umgangatho wesandi olungileyo kakhulu kunye namandla
Ukucaca kwiifowuni zefowuni
Amaxabiso aphakathi eJabra
Akukho pads ezitofotofo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Elite 3, eyona ndlela ifikelelekayo kaJabra, igcina umgangatho [Jonga]
Tronsmart ONYX PRIME, uhlalutyo kunye nokusebenza
Uthelekiso lweselula: Doogee V10 vs Doogee V20